မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၏ တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကို ဖြတ်တောက်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုများကို ထောက်ခံရန်အလို့ငှာ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန၏ တရားမျှတရေး အတွက်ချီးမြှင့်ကြေး (Rewards for Justice – RFJ) အစီအစဉ်က ငွေမဲကို ငွေဖြူဖြစ်အောင် ခဝါချခြင်း၊ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင်းသို့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ တင်ပို့ခြင်း၊ သီးခြား ဆိုက်ဘာလှုပ်ရှားမှုများ နှင့် လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သေကြေပျက်စီးစေမည့်လက်နက်များ (Weapon of Mass Destruction – WMD) ထုတ်လုပ်ပြန့်ပွားရေးကို ထောက်ကူသည့် လှုပ်ရှားမှု များအပါအဝင် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို ထောက်ကူသည့် လှုပ်ရှားမှုအချို့တွင်း စေ့စပ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ ငွေကြေးယန္တရားကို ဖြတ်တောက်ရေးသို့ ဦးတည်စေမည့် အချက်အလက်များအတွက် ဒေါ်လာ ၅ သန်းအထိ ချီးမြှင့်ရန် ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။
ဌာနသည် အခြားအကြောင်းအရာများအပြင် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနေသည်
လက်နက် ရောင်းချမှုများ နှင့် ပို့ဆောင်မှုများ -
RFJသည် မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံမှ စစ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့် လက်နက်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများကို အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းအပါအဝင် ယင်းသို့သောပစ္စည်းများကို တင်ပို့ခြင်းအပေါ် အချက်အလက်ရရှိရန် ရှာဖွေနေပါသည်။
ဆိုက်ဘာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ -
RFJ သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ခရစ်ပ်တိုငွေကြေး (cryptocurrency) အရောင်းအဝယ်များအပါအဝင် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ အစိုးရ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို အားနည်းအောင်လုပ်ရန် ကြိုးစားသူများနှင့်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေပါသည်။
သင်္ဘောတစ်စင်းမှအခြားတစ်စင်းပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းများ -
RFJ သည် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှ ထွက်သည့် ကျောက်မီးသွေးကို သို့မဟုတ် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် ရေနံစိမ်း သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်္ဘောတစ်စင်းမှ အခြားတစ်စင်းပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနေပါသည်။
မြောက်ကိုးရီးယား အလုပ်သမားများ -
RFJ သည် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအတွက် ငွေကြေးရှာဖွေနိုင်အောင် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ပြင်ပသို့စေလွှတ်ခံရသည့် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသားများကို အလုပ်ခန့်အပ်သည့် သို့မဟုတ် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံပြင်ပတွင် ၄င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ချောမွေ့စေသည့် ကုမ္ပဏီများ အပါအဝင် ၄င်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနေပါသည်။
ငွေမဲကို ငွေဖြူဖြစ်အောင် ခဝါချခြင်း -
RFJ သည် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအစိုးရအား ထောက်ကူရန် ငွေမဲကိုငွေဖြူ ဖြစ်အောင် ခဝါချမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနေပါသည်။ ယင်းတို့ထဲတွင် မြောက်ကိုးရီးယား သို့မဟုတ် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချသည့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် တည်ရှိသော ဘဏ်အကောင့်စာရင်းတစ်ခုခု အပါအဝင် မြောက်ကိုးရီးယား နှင့် ဆက်စပ်သည့် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခု သာမက မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံကိုယ်စား လည်ပတ်နေသည့် ရှေ့တန်း ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် မျက်နှာဖုံး ကုမ္ပဏီများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးစနစ်သို့ အလှမ်းမီရောက်ရှိနိုင်သူများ ပါဝင်သည့် အရိပ်ယောင်ငွေကြေးအပါအဝင် ငွေကြေး ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
RFJ သည် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ အစိုးရကို ထောက်ကူသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုကူးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ငွေကြေးအတုလုပ်ခြင်းနှင့် ငွေအစုအပြုံလိုက်ခိုး၍သွင်းထုတ်ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနေပါသည်။
RFJ သည် ကိုးရီးယား ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (Democratic People’s Republic of Korea – DPRK) တွင်းသို့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများပို့ဆောင်မှု သို့မဟုတ် လွဲပြောင်းမှုတစ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို ရှာဖွေနေပြီး ယင်းတို့ထဲတွင် ဇိမ်ခံမော်တော်ကားများ၊ ဒီဇိုင်နာအဝတ်အစားများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ အရက်၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ရေမွေး၊ သို့မဟုတ် အစိုးရထိပ်တန်းမလိုင်များအတွက် ရည်ရွယ်ထားရန် အလားအလာရှိသည့် အခြားအလားတူပစ္စည်းများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေး အလွဲသုံးစားမှုများ -
RFJ သည် မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရမှ ကျူးလွန်သည့် ပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနေပါသည်။
မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု နှင့် မူဝါဒ အားဖြည့်မြှင့်တင်ရေး အက်ဥပဒေ ၂၀၁၆ (NKSPEA, North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act) ၏ ဆက်ရှင် 104(a) နှင့် 104(b)(1) တို့အတွင်းဖော်ပြထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၌ ပါတင်ပတ်သက်နေသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ငွေကြေးယန္တရားများ ဖြတ်တောက်ရေးသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည့် အချက်အလက်များအတွက် ချီးမြှင့်ငွေ ဒေါ်လာ ၅ သန်း အထိ ကမ်းလှမ်းရန် ဦးစီးဌာနအား သီးသန့်အခွင့်အာဏာပေးထား ပါသည်။ NKSPEA ၏ ဆက်ရှင် 104(a) က အောက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်မှု များကို ခြုံငုံထားပါသည် -
ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ တင်ပို့ရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့် အဆိုပါ ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သေကြေပျက်စီးစေနိုင်သည့် လက်နက်များထုတ်လုပ်ရန် နည်းပညာများ သို့မဟုတ် အဆိုပါလက်နက်များကိုပို့ဆောင်ရေး စနစ်များကို အသုံးပြုရန် နှင့် မည်သူတစ်ဦးထံသို့မဆို နျူကလီးယား၊ ရေဒီယိုဓာတ်ကြွပစ္စည်း၊ ဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဇီဝလက်နက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ယင်းသို့သော လက်နက်တစ်ခုကို ပို့ဆောင်ရန် အပြည့်အဝဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်စေ၊ ပုံစံထုတ်ထားသည့် ကိရိယာ သို့မဟုတ် စနစ်တစ်ခုခုအပါအဝင် မည်သည့်နည်းပညာများကိုမဆို သိလျက်နှင့်၊ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ကာ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသို့ အတွင်းသို့ သို့မဟုတ် မှ တင်ပို့၊ တင်သွင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်တင်ပို့သူ။
မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသို့၊ နိုင်ငံအတွင်းသို့ သို့မဟုတ် နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည့်၊ တင်ပို့သည် သို့မဟုတ် ပြန်လည်တင်သွင်းသည့် အဆိုပါ လက်နက်၊ ကိရိယာ သို့မဟုတ် စနစ်အား ထုတ်လုပ်ရေး၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေး သို့မဟုတ် အသုံးပြုရေး နှင့်ဆက်စပ်သည့် သင်တန်း၊ အကြံဉာဏ် သို့မဟုတ် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အထောက်အကူများကို သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ပေးအပ်သူ သို့မဟုတ် သိသာများပြားသည့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများတွင်း စေ့စပ်ဆောင်ရွက်သူ။
မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသို့ သို့မဟုတ် အတွင်းသို့ ဇိမ်ခံပစ္စည်း များကို သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တင်သွင်း၊ တင်ပို့ သို့မဟုတ် ပြန်လည်တင်ပို့သူ၊
မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရ၏ ဆင်ဆာဖြတ်မှုတွင် သိလျက်နှင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူ၊ ယင်းအတွက် တာဝန်ယူသူ သို့မဟုတ် ချော့မွေ့စေသူ၊
မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး အလွဲသုံးစားပြုမှု များတွင် သိလျက်နှင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူ၊ ယင်းအတွက် တာဝန်ယူသူ သို့မဟုတ် ချော့မွေ့စေသူ၊
မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရ သို့မဟုတ် အစိုးရ အတွက် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလုပ်ဆောင်သည့် အကြီးတန်းအရာရှိ သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးဦးအား ထောက်ကူရန် သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ငွေမဲကို ငွေဖြူဖြစ်အောင် ခဝါချခြင်းတွင် စေ့စပ်လုပ်ဆောင်သူ၊ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ငွေကြေး အတုလုပ်သူ၊ ငွေကြေးအစုအပုံလိုက်ခိုး၍ သွင်းထုတ်သူ၊ သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးမှောင်ခိုလုပ်သူ၊
မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရကိုယ်စား နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လူများ၊ အစိုးရများ၊ သို့မဟုတ် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ဆန့်ကျင်သည့် ကွန်ပြူတာကွန်ရက်များ သို့မဟုတ် စနစ်များကို အသုံးပြုခြင်းမှတဆင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို အားနည်းစေသည့် သိသာထင်ရှားသော လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း သိလျက်နှင့် စေ့စပ်လုပ်ဆောင်သူ၊
လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သေကြေပျက်စီးစေနိုင်သည့် လက်နက် များနှင့်ယင်းသို့သောလက်နက်များအား ပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အခြား ပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၊ ကိုးရီးယားအလုပ်သမားပါတီ၊ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ၊ နိုင်ငံတွင်းလုံခြုံရေး၊ သို့မဟုတ် ထောက်လှမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းစခန်းများ သို့မဟုတ် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံပြင်ပ အပါအဝင် အတင်းအကျပ်အလုပ်စေခိုင်းသည့်စခန်းများ လည်ပတ်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးအတွင်း သို့မဟုတ် ယင်းတို့မှ အသုံးပြုရန်အတွက် မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရ သို့မဟုတ် အစိုးရကိုယ်စား သို့မဟုတ် အတွက် လုပ်ဆောင်နေသူ တစ်ဦးဦးထံသို့ သို့မဟုတ် ထံမှ သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တန်ဖိုးထိုက်တန်သော သတ္တု၊ ဂရပ်ဖိုက်၊ သတ္တုကြမ်း သို့မဟုတ် တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပြင်ဆင်ပြီး သတ္တုများ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်၊ စတီး၊ ကျောက်မီးသွေး သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲရ်တို့အား သိသာများပြားသည့်ပမာဏဖြင့် ရောင်းချ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင် သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးသူ၊
မည်သည့်လက်နက်များမဆို သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု (22 U.S.C. § 279422 U.S.C. § 2794 တွင်း ခွဲခြားဖော်ပြထားသည့် အခေါ်အဝေါ်များအတိုင်း) ကို မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသို့၊ အတွင်းသို့ သို့မဟုတ် မှ သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တင်သွင်းသူ၊ တင်ပို့သူ သို့မဟုတ် ပြန်လည်တင်ပို့သူ။
ရွှေ၊ တိုက်တေနီယမ် သတ္တုရိုင်း၊ ဗနာဒီယမ် သတ္တုရိုင်း၊ ကောပါး၊ ငွေ၊ နီကယ်၊ ဇင့် သို့မဟုတ် ရှားပါးသည့် ကမ္ဘာမြေထွက် မင်နရယ်များကို သိသာများပြားသည့် ပမာဏတစ်ခုခုဖြင့် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှ သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရယူသူ၊
မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသို့ ရော့ကက်၊ လေကြောင်းလုပ်ငန်းသုံး သို့မဟုတ် ဂျက်လေယာဉ်ဆီအား (မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ပြင်ပရှိ အရပ်ဘက် ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီးမှ ၄င်း၏လေယာဉ်ပျံ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသို့ ပျံသန်းစဉ် သို့မဟုတ် ပြန်လာစဉ် အထူးသီးသန့်အသုံးပြုရန်အတွက်မှလွဲ၍ ) သိသာများပြားသည့် ပမာဏဖြင့် သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရောင်းချသူ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးသူ၊
သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ သိသာများပြားသည့် လောင်စာဆီ သို့မဟုတ် အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ခြင်း၊ ခိုနားရန် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အထူးသီးသန့်သက်ရောက်ဆဲ အမိန့်တစ်ခု သို့မဟုတ် သက်ရောက်ဆဲ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုအောက်တွင် ပုံစံပြထားသည့် ယာဉ် သို့မဟုတ် လေယာဉ်ပျံ တစ်စီး သို့မဟုတ် သက်ရောက်ဆဲ အထူးအမိန့် သို့မဟုတ် သက်ရောက်ဆဲ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုအောက်တွင် ပုံစံပြထားသည့် လူတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သော ယာဉ်ကို လည်ပတ်ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းရန် သိသာများပြားသည့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းသူ သို့မဟုတ် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို ချောမွေ့စေသူ၊
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှ အထူးခွင့်ပြုထားသည်မှလွဲ၍ မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရ ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သော ယာဉ်တစ်စီးအား သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အာမခံသူ၊ မှတ်ပုံတင်သူ၊ မှတ်ပုံတင်ရေးကို ချောမွေ့စေသူ သို့မဟုတ် အာမခံ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းပေးသူ၊
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှ အထူးခွင့်ပြုထားသည်မှလွဲ၍ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုဖြင့် သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ စာပေးစာယူအကောင့်တစ်ခု (22 U.S.C. § 9221a(d)(1) တွင်း အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) ထိန်းသိမ်းထားရှိသူ၊ သို့မဟုတ်
အပိုဒ် (1) မှ (14) အထိတလျှောက် ဖော်ပြထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခုအတွင်း သိလျက်နှင့် စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးစားသူ။
NKSPEA ၏ ဆက်ရှင် 104(b)(1) က အောက်ပါတို့ရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ခြုံငုံကာကွယ်ပါသည် -
NKSPEA ၏ ဆက်ရှင် 104(b)(1) က အောက်ပါတို့ရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ခြုံငုံကာကွယ်ပါသည် –
(က) အောက်ပါတို့နှင့် ညီညွတ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသူ မည်သူမဆိုအတွက် ငွေကြေး၊ ဝတ္ထုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးရန် သိလျက်နှင့် စေ့စပ်ဆောင်ရွက်သူ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်သူ၊ ကူညီသူ၊ ကမကထပြုသူ သို့မဟုတ် ပေးအပ်သူ၊ သို့မဟုတ် ဝတ္ထုပစ္စည်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ကူသူ –
(၁) သက်ရောက်ဆဲ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု၊
(၂) 22 U.S.C. § 9254 အောက်တွင် ပြဌာန်းထားသော မည်သည့်စည်းကမ်းမဆို၊ သို့မဟုတ်
(၃) သက်ရောက်ဆဲ အထူးအမိန့်တစ်ခုခု၊
(ခ) သိလျက်နှင့် အောက်ပါတို့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သူ –
(၁) မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအစိုးရ၏ အရာရှိတစ်ဦး သို့မဟုတ် ထိုအရာရှိကိုယ်စား လုပ်ဆောင်သည့်သူတစ်ဦးဦးအား လာဘ်ပေးခြင်း၊
(၂) မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအစိုးရ၏ အရာရှိတစ်ဦး သို့မဟုတ် ထိုအရာရှိကိုယ်စား လုပ်ဆောင်သူတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် ထိုသူ၏အကျိုစီးပွားအတွက် ပြည်သူပိုင်ရန်ပုံငွေများကို လှည့်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုခြင်း ၊ သို့မဟုတ်
(၃) အပိုဒ် (၁) သို့မဟုတ် (၂) တွင်း ဖော်ပြထားသော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခုမှရရှိသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊
(ဂ) အပိုဒ်ခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) တွင်းဖော်ပြထားသော လုပ်ဆောင်မှုများအား ထောက်ကူရာတွင် သို့မဟုတ် ထောက်ကူရန် သိသာများပြားသည့် ငွေကြေး၊ ဝတ္ထုပစ္စည်း သို့မဟုတ် နည်းပညာအထောက်အပံ့များအတွက်၊ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သိလျက်နှင့် ဝတ္ထုပစ္စည်း ထောက်ကူခြင်း၊ ကမကထပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပေးအပ်ခြင်း၊
(ဃ) မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရထံမှ သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ သက်ရောက်ဆဲ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွင်း ပေးအပ်ထားသည့် အကန့်အသတ်များထက်ပိုသော ကျောက်မီးသွေး၊ သံ၊ သို့မဟုတ် သံ သတ္တုရိုင်း ပမာဏအမြောက်အများ ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရယူခြင်း၊
(င) မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရထံမှ အထည်အလိပ် ထူးထူး ခြားခြားအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ပမာဏအမြောက်အများကို သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရယူခြင်း၊
(စ) သက်ရောက်ဆဲ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုအားချိုးဖောက်မှုနှင့်ဝတ္ထုပစ္စည်းအရသက်ဆိုင်သည့် မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရပိုင် ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွှဲပြောင်းမှုအမြောက်အများကို သိလျက်နှင့် ချောမွေ့အောင်လုပ်ပေးခြင်း၊
(ဆ) ငွေကြေးအစုလိုက်အပုံလိုက်၊ တန်ဖိုးကြီး သတ္တုများ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ သို့မဟုတ် (a)(10) အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အခြား တန်ဖိုးကြီးသည့် အမွေအနှစ်များကို မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရသို့ သို့မဟုတ် ထံမှ လွှဲပြောင်းမှု အမြောက်အများကို သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ချောမွေ့အောင်လုပ်ပေးခြင်း၊
(ဇ) ရေနံစိမ်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ၊ သန့်စင်ပြီးရေနံ၊ အခြားရေနံအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ရေနံဘေးထွက်ပစ္စည်းများ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည် သို့မဟုတ် အခြား အခြားသဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရင်းမြစ်များကို မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအစိုးရသို့ သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရောင်းချခဲ့ခြင်း၊ လွှဲပြောင်း ခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် ပမာဏအမြောက်အများ ပေးအပ်ခြင်း (လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လက်ခံထားသည့် သို့မဟုတ် ဆက်ရှင်ခွဲ (a)(11) အောက်တွင် လက်ခံထားသည့် လောင်စာသုံး ရေနံချက်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ သို့မဟုတ် ဒီဇယ်လောင်စာဆီ မှလွဲ၍)၊
(စျ) အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းအပါအဝင် မြောက်ကိုးရီးယား အစိုးရ၏ အွန်လိုင်း စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက် သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ချောမွေ့စေခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ယူခြင်း၊
(ည) မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရထံမှ ငါးဖမ်းပိုင်ခွင့်ကို သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရယူခဲ့ခြင်း၊
(ဍ) မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရထံမှ အစားအစာ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ထူးထူးခြားခြားအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ပမာဏအမြောက်အများကို သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရယူခဲ့ခြင်း၊
(ဌ) မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရ သို့မဟုတ် ကိုးရီးယားနိုင်ငံ အလုပ်သမားပါတီမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အသုံးပြုရန်အတွက် အမြတ်ငွေအမြောက်အများ ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်သည့် အပြုအမူဖြင့် မြောက်ကိုးရီးယားမှ အလုပ်သမားများကို တင်ပို့ရန်အတွက် သိလျက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ စေ့စပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း၊ ချောမွေ့စေခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ယူခဲ့ခြင်း၊
(ဋ) မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ မိုင်းတူးဖော် ရေး၊ စွမ်းအင် သို့မဟုတ်​ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွင်း ငွေအမြောက်အများ အပေးအယူ သို့မဟုတ် အပေးအယူများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်
(ၓ) ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ မှ အထူးခွင့်ပြုထားသည်မှ လွဲ၍ နှင့် ဆက်ရှင်ခွဲ (a)(14) တွင်းဖော်ပြထားသည့် စာပေးစာယူအကောင့်တစ်ခုမှတဆင့် မဟုတ်ပဲ မြောက်ကိုးရီးအစိုးရ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အဖွဲ့ခွဲ၊ လက်ခွဲ သို့မဟုတ် ရုံးတစ်ခုခု၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို သိလျက်နှင့် ချောမွေ့အောင်လုပ်ပေးခြင်း။
ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ လိမ်လည်မှုနှင့် အလွဲသုံးစားလုပ်မှုအက်ဥပဒေ
မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရ၏ လမ်းညွှန်မှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင် ကွန်ပြူတာ လိမ်လည်မှုနှင့် အလွဲသုံးစားမှု အက်ဥပဒေ (“CFAA”, Computer Fraud and Abuse Act), 18 U.S.C. § 1030 ကို ချိုးဖောက်မှု တစ်ခုအား ကူညီ သို့မဟုတ် အားပေးသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး အား ခွဲခြားဖော်ထုတ်ခြင်းသို့ ဦးတည်စေနိုင်သည့် အချက်အလက် အတွက် ချီးမြှင့်ငွေ ဒေါ်လာ ၅ သန်းအထိ ကမ်းလှမ်းရန်လည်း ဦးစီးဌာနကို အာဏာပေးအပ်ထားပါသည်။ ဦးစီးဌာနက အောက်ပါတို့ အထူးသဖြင့် ပါဝင်သော်လည်း၊ ယင်းတို့သာ မဟုတ်၊ စိတ်ဝင်စားမှုဖြင့် CFAA ကို ချိုးဖောက်သည့် အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ခုခုအတွက် အချက်အလက် ရှာဖွေနေပါသည် -
အချက်အလက်များ ခိုးယူရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြည်သူပိုင် နှင့် ပုဂ္ဂလိကဆက်တာပိုင်ကွန်ပြူတာများ နှင့် ကွန်ရက်များအတွင်း အခွင့်အာဏာမရပဲ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း၊
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ဆော့ဖ်ဝဲများ (malware) ပို့ခြင်း၊
ပြန်ပေးဆော့ဖ်ဝဲ့ရ် (ransomware) ဖြန့်ဖြူးခြင်း နှင့် အသုံးပြုခြင်း၊
လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထံမှ ငွေညှစ်ရန် သို့မဟုတ် 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2)၊ (a)(3)၊ (a)(5) နှင့် (a)(7) တွင်း တားမြစ်ထားသည် အခြားတန်ဖိုးရှိသည့်အရာတစ်ခုခုကို ခြိမ်းခြောက်တောင်းဆိုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကွန်ပြူတာတစ်လုံး နှင့်ဆက်စပ်သော တန်ဖိုးရှိသည့်တစ်စုံတစ်ရာကို ပျက်စီးစေရန်၊ ယင်းမှ အချက်အလက်ရရှိရန် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုရန် ခြိမ်းခြောက်လွှာများပို့ခြင်း။